Deg Deg Daawo Video:Dacwad SNM Laga Gudbiyay Loona Gudbiyay TURKIGA!!
Xukumada fadaraalka soomaaliya ayaa dacwad ka gudbisay masuul turki ah oo loo geeyay hargeisa in uu ufudeedsho snm wixii ay xamar u imaan lahaayen kaasi oo ka gudbay xadkii loo igmaday kana hadlay arrimo muqadis ah oo ay kamid tahay in uu ka hadlay basaboorka somalia isagoona jeebkiisa kala soo baxay wax la dhaho basaboorka snm in uu aqoonsaday.
Hadaba snm oo ka war heshay dacwadii loo gudbiyay turkiga lagana gudbiyay masuulka turkiga ah ee dhaafay wixii loo igmaday ayaa qeylo dhaan ka wadhay iyagoona sheegay in ay tahay xaasidnimo.
Beesha Samakaab Cali oo Gogol Nabadeed u Fidisay Colaado ka jira Degmada Taleex
Odayaasha iyo waxgaradka Beesha Samakaab Cali ayaa ku baaqay in xal laga gaaro colaado kala dhaxeeya mid kamid ah beelaha dega degmada Taleex ,taasi oo in muddo ah soo jiitamaysay ,isla markaana sababtay khasaare dhinacyo badan isugu jira.
Baaqan oo ay si wada jir ah usoo saareen waxgaradkan ayey ku codsadaan in la helo jawi lagu wada hadli karo ,isla markaana lagu dhameyn karo khilaafkan oo dhamayntiisa lagu sheegay in ay tahay waajib saaran dhinac kasta.
“Ma jirto cid gaara , ama shakhsiyaad gaara oo nabadu ka go’do, waa arin dadka ka wada dhaxaysa oo cid kasta waajib ay ku tahay ka qayb-qaadashadeedu, Iyadoo la garab siinayo cidkasta oo wanaaga rabta, Soomaliduna waxay ku maah-maahdaa, taladada waxaa loo dhiibtaa ciddaan hagarna kaa galayn, hantina kaa dhaqanayn “ ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay odayaasha.
Sidoo kale odayaasha ayaa tilmaamay in la magacaabo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya xal u helidda khilaafka labada beelood ka dhaxeeya ,iyada oo la dar-dar galinayo qabashada shir-weyne ay labada dhinac isku soo hor-fariisanayaan.
“Waxaanu ugu baqaaynaa walaalahayo, ehalkayo ay naga dhaxayso wada dhalashadu in ay soo magacawdaan ciddii wada-hadalkaa uga qayb gali lahayd, iyado xagayagana aanu soo magacaabanayno ciddii na mateli lahayd, lana sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya muddaynta waqtiga iyo madasha kulanka, waa in laga talaaba cid allaale ciddii ka hortimaadda nabaddayntaas ay ku baaqayaan dadka samaha jeceli, ee wanaaga iyo xasiloonidda la raba dadkooda iyo dhulkooda “ ayaa mar kale lagu yiri baaqan.
Dadka soo jeediyey baaqan oo ka kooban culimo, odayaal, aqoon yahan iyo qar ka mida hal doorka dhalin yarada, waxaa kamid ahaa
1-Oday : Saleebaan Abshir X. Diiriye
2-Odey : Cali Macalin Xirsi
3-Oday: Mohamed Ahmed Taleexi
4-Odey: Jaamac Aw adan Cali
5-Odey: Yuusuf Ciise Maxamed
6-Eng: Mukhtar Abshir X. Diiriye
7-Maayor: Saleebaan Axmed-Food Xaaji Diiriye
8-Oday: Yusuf Mohamed Yusuf (dhigane)
9-Oday: Abdillahi Mohamed Omar (walacwalac)
10-Oday: Hurre Faarah Xeedhayare
11-Oday: Faarah Mahamuud Abdi (Faarax IsQaniin)
12-Oday: Jama Mohamed Macalin (jama fooje)
13-Oday: Jama Mohamuud Aadan (jama taleexi)
14-Oday: Jaamac Ibraahim Aw Axmed (Waqle)
15-Oday: Salaad Ismaaciil Maxamuud
16-Oday: Cabdirashiid Abshir X. Diiriye
17-Eng: Maxamud Abshir Diiriye
18-Oday: C/qaadir Abshir X
18-Siyaasi: Fuaad Cabdi Xaaji Diiriye
20-Eng: Mohamed Abdi Macalin (xiiray)
21-Eng: C/qani Cali Faarax Xirsi
22-Sheekh: Maxamed C/qaadir Finiin
23-Oday: Faarax Jaamac Aw-Aadan (faarax Fadal)
24-Oday: Jaamac Xaaji Diiriye Maxamed (Dhoodi)
25-Aqoon yahan: Cabdifataax Maxamed-Khaliif Xirsi
26-Aqoon yahan : Cabdinaasir Cali-dheere Cabdi Muuse
27-Aqoon yahan : Farxaan Axmed aadan Cali
28-Aqoon yahan: Mahamuud Salah Ahmed (caato)
29-Aqoon yahan : Mukhtaar Cabdi Xaaji Diiriye
30-Aqoon-yahan : Axmed Aw Maxamed Xasan digdigo
31-Aqoon yahan : C/naasir C/rashiid Axmed Gataa
32-Oday: Cabdiraxmaan Axmed Aw aadan Cali (Cabdi Haaf)
33-Oday: Cabdullaahi Axmed Aw- Aadan Cali (Haaf)
34-Oday: Cabdurashiid Axmed aw-aadan Cali (Haaf)
35-Colonel: Maxamuud Axmed Maxamed (Gubadle)
36-Colenel : Saleebaan Cabdi Caatay
37-Jamaal Cumar Ibraahim
38-Maxamed Cali Faarax Xirsi
39-Oday: Aadan Cabdullaahi X
40-Oday: Abdi Ahmed Faarah (abdiraawe)
41-Oday: Abdirahman (cagabaruur)
42-Oday: Abdi-wali Ahmed Taleexi
43-Oday: Ahmed Mohamed Guuleed
44-Oday: Ahmed Mohamed Macalin (caare)
45-Oday: Biilaal C/qaadir Finiin
46-Oday: C/kariim Cali Macalin
47-Oday: C/weli Cali Faarax Xirsi
48-Oday: Cabdi-Cabdullaahi Xaaji Diiriye
49-Oday: Cabdiraxmaan Axmed-Food Xaaji Diiriye
50-Oday: Cabdisamed Maxamed AXmed Sanqadhweyn
51-Oday: Cabdisemd Axmed Aadan Taleexi
52-Oday: Cabdullaahi Abshir X. Diiriye
53-Oday: Cabdullaahi Cilmi Ducaale
54-Oday: Cabdulqaadir Cabdullaahi X. Diiriye
55-Oday: Cali Ismaaciil Maxamuud
56-Oday: Dhagaxay Axmed aw-aadan Cali
57-Oday: Dheeliye Jaamac Aw-Aadan
58-Oday: Digaale Ismaaciil Maxamuud
59-Oday: Iidle Cabdullaahi X
60-Oday: Jaamac Abshir X
61-Oday: Jaamac Cabdi Maxamuud
62-Oday: Mahad Maxamuud Xaaji Diiriye
63-Oday: Maxamed Axmed-Food Xaaji Diiriye
64-Oday: Mohamed Nuur Faarah Xeedhoyare
65-Oday: Sanwayne Jaamac aw-aadan
66-Oday: Waraabe Cabdigadhle Jaamac (Waraabe Cabdigadhle)
67-Oday: Xasan Maxamuud Xaaji Diiriye
68-Oday: Xasan-dhoodi Ismaaciil Maxamuud
Talyaaniga: Muhaajiriin Afrikaan ah oo ka qeyb qaatay samatabixinta dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka
Dadka Afrikaanka ah ayaa sida la ogsoon yahay waxay labaatankii sano ee lasoo dhaafay isku maqiiqayeen oo galayeen Talyaaniga kadib marka ay ka tallaabaan biyaha badda Miditaraneanka ee u dhexeeya Talyaaniga iyo waqooyiga qaaradaan Afrika.
Afrikaanka ayaa Yurub u raadsada nolol cusub. Arbacadii dhaweyd markii dhul gariirku ka dhacay Talyaaniga koox muhaajiriin ah oo Afrikaan ah ayaa tagay halkii dhul gariirku ku dhyftay ayagoo caawinaayay dadkii ku waxyeeloobay halkaa.
'Waxaanu doonaynaa inaan dadka halkaan caawino', sidaa waxaa yiri Cabdullaahi oo kasoo haajiray dalka Benin.
Badeelo, garweyn iyo fargeetooyin ayay 20 qof oo muhaajiriin ah u isticmaaleen diyaarinta dhul la doonayay in dadka waxyeeladu soo gaadhay looga mudo teendhooyin iyo meelo ay diyaarado qummaati u kaca kusoo dagaan.
Dadkaa oo dhammaantood Muslimiin ahaa salaadii markii la gaaray waa ay tukadeen.
Lagasoo bilaabo Arbacadii tirada dhimashadu waxay gaadhay 267. Muhaajiriinta cawimaada u fidiyay dadka waxyeelooyinku kasoo gaareen dhulgariirka ayaa badankoodu ka yimid Burkina Fasso, Niger iyo Senegal.
Dhanka kale, waxaa bilaabatay baroor diiq loo samaynayo dadkii nafafyaalkooda ku waayay dhul gariirkaa ba'naa.
Calanka dalkaa ayaa hoos loo dhigay dhammaan daafaha dalkaas Talyaaniga.
ANSA oo ah wakaalad warar oo dawlada dalkaasi leedahay ayaa sheegtay in Raisal Wazaaraha dalkaa Matteo Renzi iyo madaxweynaha Sergio Mattarella ay ka qeyb qaadanayaan tacsi loo dhigaayo dadkii halkaa ku geeriyooday ayna booqan doonaan meelihii dhul gariirku ku dhuftay.
SAWIRRO: Madaxweynaha oo Arrimaha Horumarinta iyo Dib u dhiska Somalia kala hadley Madaxa UNDP
Ugu dambeyn, Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay.
Kooxo hubeysan oo Muqdisho siyaabo kala duwan ugu dilay Sarkaal ka tirsan Millateriga iyo Askari
Kooxo hubeysan ayaa maanta siyaabo kala duwan ugu dilay Muqdisho Sarkaal sare oo ka Tirsanaa Ciidanka Millateriga Soomaaliya iyo Askari ka tirsan ciidamada ciidanka booliiska Soomaaliya.
Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray, Yaxye Aadan Cali ayaa waxay lagu dilay saakay degmada Dharkeynleey ee gobolka Banaadir, iyadoo kooxihii dilay oo ahaa kuwo ku hubeysan bastoolado ay si fudud goobta uga baxsadeen.
Wararka ayaa sheegaya in sarkaalkan la toogtay xilli uu ku socday shaqadiisa, isla markaana ma jirto cid loo qabtay dilkiisa, mana jirto hadal ay dilka sarkaalkaan ay ka soo saareen hay’adaha amniga dowladda Somalia.
Dhanka kale, Askari ka tirsanaa ciidanka booliiska Somalia ayaa lagu dilay maanta gudaha suuqa bakaaraha ee Muqdisho, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay askari kale oo ka tirsan ciidanka canshuuraha ee Dowladda Hoose ee Xamar.
Askartan ayaa waxaa weeraray lix nin oo bastoolado ku hubeysanaa, iyadoo askar kale oo la socday Askariga la dilay iyo kan la dhaawacay ay iyaguna Toogasho ku dileen mid ka mid ah kooxihiii hubeysnaa ee dilka geystay, sida uu Warbaahinta u xaqiijiyay afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir, C/fataax Cumar Xalane.
Ugu dabmeyn, Qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen, kaddib markii xalay kooxo hubeysan weerar bambaano ku weerareen Guri uu deggenaa wasiir u dowlaha gaashaandhigga Soomaaliya, Maxamed Cali Xagaa iyo Xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Muqdisho -Weeraro Dhimasho iyo Dhaawac Geystay
Sargaal katirsanaa Wasaarada Gaashaandhigga ayaa maanta toogasho lagu dilay Muqdisho.
Dabley hubeysan ayaa toogasho ku dilay sargaalkaa. Sargaalkaa ayaa ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee Wasaarada Gaashaandhigga. Goobjoogeyaal ayaa xaqiijiyay in dabley heybtooda aan la garanayn ay toogteen sargaalka kuwaas oo ay usuurta gashay inay goobta ka baxsadaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in sidoo kale Muqdisho xalay dhowr weerar oo kale ay ka dhaceen.
Weerar kale ayaa waxaa dabley aan heybteeda la aqoon ku bartilmaansadeen Waziiru Dawlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa.
Labo bam gacmeed ayaa ay kutuureen dableydu guriga Mudane Xagaa oo kuyaala xaafada Xamarweyne.
Waxaa usuurta gashay in dadkii falka geystay ay goobta ka baxsadaan. Afar qof ayaa ku dhaawacmay markii hore laakiin mid ayaa dhaawacyadii soo gaaray u dhintay kadib markii isbitaal loola cararay.
Qofka dhintay ayaa rayid ahaa 3da dhaawacaana waxaa ay ka tirsan yihiin ilaalada waziiru dawlaha.
Booliska ayaa sheegay inay dad ay tuhmeen ay qabteen oo weeraradaa ay uga shakiyeen haatana ay baarayaan.
Dabley ayaa degmada Dharkeenley ku dilay sargaal ka tirsanaa militariga oo la oran jiray Yaxye Aadan.
Dabley ayaa iyana Bakaaraha ku dilay hal askari hal kalena dhaawacay. Askar ayaa dilay mid ka mid ahaa dableyda.
Ilaa iyo hada wax la tuhunsaneyaal ah looma soo qaban dhacdooyinkaa ka dhacay Dharkeenley iyo Bakaaraha.
Madaxweynaha Turkiga Raccep Tayyip Erdogan ayaa Daacish ku eedeeyay weerarkii qaraxa ee Sabtidii dalkaa ka dhacay inay ayadu ka dambeysay.
Madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha Somalia oo wadajir u cambaareeyay weerarkii Gaalkacyo
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud iyo RW Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa si isku mid ah waxay u cambaareeyeen Weerarradii dadka badani ay ku geeriyoodeen ee Maanta ka dhacay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in kooxaha Argagixisada ah guul-darrooyin culus oo ku habsaday awgeed ay doonayaan inay gumaadka shacabka u adeegsadaan muujinta saameyntooda.
"Dagaalka aanu kula jirno Argagaxisada oo aan ugu Hiillinayno Qiimaha nolosha dadka Soomaaliyeed way sii socon doonaan, waxaana idinku bishaareyneynaa in dhawaan lasoo af-jari doono argagaxisada, laga suulin doono gayiga Soomaaliya iyo Gobolka Geeska Afrika oo dhan," ayuu Madaxweyne Xasan ku yiri Bayaan uu ka soo saarray Madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xusay in Dadkii maanta Weerarradaas ku naf-waayay ay Noloshooda Qaaliga ah ku waayeen iyagoo Dalkooda iyo Shacabkooda u adeegaya, wuxuuna Alle uga baryay inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, qoysaskii ay ka baxeenna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Madaxweynaha Somalia ayaa faray Laamaha Amniga ee Dowladda Federaalka Somalia iyo maamul-goboleedyada inay xoojiyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo haatan maraya meel gabo-gabo ah, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Dhanka kale, Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Somalia, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa isagana ku Tilmaamay Weerarradii Maanta lagu qaaday Xarunta Dowladda Hoose ee Puntland ay ku leedahay Gaalkacyo, kuwo waxashnimo ah.
“Xukuumadda Soomaaliya way cambaareyneysaa Weerarradii Qaraxyada ahaa ee lagu qaaday xarunta Dowladda Hoose ee Magaalada Gaalkacyo, Waxaan leeyhay Shacabka Gaalkacyo si Wadajira ah meel uga soo jeesta dhagar-qabayaasha bar-tilmaameedsanaya shacabka iyo madaxda,” ayuu ku yiri bayaan uu dhankiisa soo saaray maanta RW Sharma'arke.
Wuxuu kaloo RW Somalia Tacsi u diray ehellada Dadkii ku Geeriyooday Weerarradaas, isagoo Dadka dhintay EEBBE uga baryayay inuu Jannadiisa Fardowsa ka Waraabiyo, kuwii dhaawacmayna uu Deg-deg caafimaad u siiyo.
Ugu dambeyn, weerarradan oo ay ku dhinteen 23-qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 30-qof, ayaa waxaa mas’uuliyaddooda sheegatay Al-shabaab, kuwaasoo ahaa qaraxyo loo adeegsaday Gaadiid laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa.
Xog-hayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka John Kerry oo Maanta Imaanaya Kenya
John Kerry oo ah Xog-hayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka ayaa maanta booqasho ku imaanaya Kenya ayadoo beri uu la leeyahay madaxweyne Uhuru Kenyatta wada hadalo.
John Kerry iyo Kenyatta ayaa lagu wadaa maalinta beri ah inay shir ku qabtaan madaxtooyada ayagoo la filaayo inay ka wada hadlaan arimaha ammaanka ee gobolka iyo doorashada sanadka soo socda ka dhici doonta Kenya.
Sidoo kale ayaa waxaa lagu wadaa in Kerry uu la kulmo Waziirada Kenya u Qaabilsan Arimaha Dibada Aaamina Maxamed iyo waziiro kale oo dawlada Kenya ka tirsan.
Arimaha la lafo guri doono ayaa waxaa kujira colaadaha hareeyay dalka curdanka ah ee Koofurta Suudaan iyo kala guurka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya.
War saxaafadeed ay soo saartay haweeneyda ah Kaaliyaha Xog-hayaha Amuuraha Afrika ee Mareykanka Linda Thomas-Greenfield, ayaa sheegay in Kerry uu booqasho ku kala bixin doonto Kenya iyo Nigeria min Agoosto 21 ilaa 28.
Waxaa kaloo lagu sheegay war murtiyeedkaa in Kerry uu la kulmi doono dhallinyaro Afrikaan ah oo ah hoggaamiyeyaal soo koraya.
Inkastoo aanan weli la caddeyn waxyaabaha kale ee lagu soo qaadi karo wada hadalada waxaa ku jira xiritaanka la hadal hayo ee xeryaha Dhadhaab iyo sidii AMISOM looga dhigi lahaa ciidamo hoos taga QM.
Hoobiyeyaal lagu Weeraray Xarunta Wasaarada Gaadiidka Xukuumadda Somalia ee Muqdisho
Madaafiic hoobiyeyaal ah ayaa lagu weeraray xarunta Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku Taalla Degmada Shingaani ee Muqdisho, waxaana madaafiicdani ay sababeen khasaare aan illaa hadda la ogeyn cadadkiisa.
Wararka ayaa sheegaya in madaafiicdan ay gudaha ugu dhaceen xarunta, waxaana sidoo kale la sheegay in garaash daris la ah xarunta wasaarada ay ku dhaceen qaar ka mid ah madaafiicda ayna baabuur yaallay burburiyeen.
Duqeynta kaddib, ayaa waxaa Xarunta Wasaaraddaas gaaray Gaadiidka Gurmadka deg-dgga ah oo ka qaadayay dhaawacyada iyo dhimashada ka dhalatay, inkastoo aan weli la ogeyn tirada dadka ay kasoo khasaaruhu gaartay duqeymahan.
Sidoo kale, Shacabka ku dhaqan Degmada Shingaani ayaa sheegaya in madaafiicdaan ay soo dhaceen Gellinkii dambe ee maanta, balse illaa hadda lama oga cida ka dambeysay duqeyntan.
Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo sheegay in aysan Waxba iska bedelin xilligii Doorashada
Guddida Doorashooyinka Somaliland, ayaa sheegay in aanay jirin wax muddo kordhin ah oo soo gaadhay, iyagoo cadeeyey in wakhtigii doorashada ugu tallogaleen aanay waxba iska bedelin.
Doorashadda Somaliland ayaa la filayaa inay dhacdo bisha March,2017 ka, waxaana ka hor la doonaya in dhamaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka wada dhacdo goboladda Somaliland, ka dibna loo diyaar garoobo wakhtigii doorashaddu dhici lahayd.
Afhayeenka guddida doorashooyinka Qaranka Siciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in jadwalkii doorashadda ugu tallogaleen uu sidiisii yahay, isagoo xusay in gobolkii ugu dambeeyey Diiwaangelinta ay bisha August 23-keedda ka bilaabmayso.
Sidoo kale, Afhayeenka guddida doorashooyinka oo ka jawaabaya warar baryahan la hadal hayey oo sheegaya in madaxweynaha loo kordhinayo ayuu wararkaasi ku tilmaamay mid aanay ka war hayn, waxaanu yidhi“Wax la kordhinayo maanu arag, wax isbedelay maanu arag, wax rasmi ah oo na soo gaadhayna ma jirto, wixiii suuqa la isla dhex marayo waa halkeedda oo wax badan baa la sheegaa aanay waxba ma jirin, laakiin Komishan ahaan jadwalkii noo dajisna wax iska bedelay ma jiraan ee sidiisa ayuu yahay, wakhtigii doorashadda ugu tallogalay ayuu ku socdaa, illaa imika sidaas ayuu ku socdaa”
Mar kale isagoo ka hadlaya Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ka bilaabmaysa gobolka Sool, waxa uu yidhi “Diiwaangelintii gobolkii u dambeeyey ayey ka bilaabmaysa ee Sool, maalinta Barri oo Axad ah ayaa la daahfurayaa, waxaana maalinta ISniinta ee taariikhdu tahay 23, bishan si rasmiya uga bilaabmaysa gobolkaasi Sool,waxaana diiwaangelintu ka dhacaysa 153 goobood gobolka Sool, waxaanu dadka reer Sool ugu baaqayna inay is diiwaangeliyaan oo dadku qaataan kaadhadhka doorashadda si ay usoo doortaan dadkii deegaankodda u matali lahaa, wacyigelintiina komishanka Doorashooyinka iyo hay’addo laba way ku sameeyeen, marka waa in reer Sool codkooddda muujiyaan sidaas ayey diiwaangelintu muhiim u tahay, qof kasta oo lix toban ah waa inuu is diiwaangaliyaa oo uu qaata kaadhadhka, dadka waxaan uga digayna inay ku noqnoqdaan diiwaangelinta, qofkii ku celceliya Serverku wuu qabanayaa, hadhowna qofku wuxuu waayaa xaquuq aad u faro badan.”
Si kastaba ha ahaatee, waxa baryahan la hadal hayey in madaxweynaha iyo golaha Wakiiladda loo kordhinayo, iyadoo arrintaasi sii xoogaysata mudaddii uu madaxweynuhu safaaradda ku tagay gobolka Awdal iyo Sool oo uu la kulmay madax dhaqameedka iyo waxgaradka goboladaasi.
Dhinaca kale, waxa xarunta gobolka Sool ee Laascaanood ku sii qulqulaya hogaamiyeyaasha xisbiyadda, guddida doorashooyinka iyo kormeerayaasha diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo maalinta Barri daahfurkeedda lagaga dhawaaqayo gobolkaasi Sool, iyadoo magaaladda Laascaanood marti galin doonta dhamaan dadka ay khuseyso diiwaangelinta, haday tahay wasiiradad arrimaha gudaha, laamaha amniga, xildhibaanadda baarlamaanka iyo masuuliyiinta asxaabta kala duwan, kuwaas oo indho indhaynaya qaabka ay uga dhacayso gobolka Sool.
Madaxweyne Siilaanyo oo Maanta ka ambabaxay Laascaanood markii uu xariga ka jaray wadooyin
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa ka ambabaxay Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool, kaddib markii uu waddooyin la dhisay xadhiga ka jaray, isla markaana uu soo maray meelo kala duwan oo ay ka socdeen dhismayaal.
Siilaayo, ayaa wuxuu Maanta xadhiga ka jaray waddo laami ah oo marta waqooyiga iyo galbeedka Degmada Laascaanood, Taasoo dhismaheedu uu hadda marayo Meel gabo-gabo ah.
Madaxweynaha oo ay Weheliyeen Xubno Xukuumaddiisa ka tirsan ayaa sidoo kale waxay soo mareen machadka cafimaadka, isbitaalka guud iyo Dugsiga Waxbarasho ee ugu balaadhan Laascaanood oo uu dhisme ku socdo.
Sidoo kale, Madaxweyne Siilaanyo waxaa warbixin ka siinayay goobahaas ay isaga iyo wafdigiisu soo mareen guddoomiyihii hore ee gobolka Sool, Mustafe Cabdi Ciise Shiine oo xusay in muddadii yarayd ee uu gobolka Sool Maamulayay ay u suuro-galeen waxqabadka balaadhan ee la arkayo.
Madaxweynaha Somaliland oo meel walba oo uu tago la Hadlayay bulshada, ayaa sheegay inay wax badan qabteen qabteen, isla markaana ay kuwo kale qabanayaan. Wuxuuna yiri. "Annaga Waa naga go'an tahay Horumarinta Gobolka Sool, idinkana waxaa la dinka dooayaa inaad ka qayb-qaadataan."
Dib u laabashada Madaxweynaha Somaliland ayaa kusoo beegmaysa xilli la filaayo inay degmada Laascaanood iyo Gobolka Sool oo dhan ka billowdaan diiwaan-gelinta cod-bixiyeyaasha, inkastoo Wasiiro uu ka mid yahay Wasiirka Arrimaha Gudaha, ay sii joogayaan Gobolka.
Dhinaca kalena, Waxaa magaalada Laascaanood soo gaaray Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI, C/raxmaan Maxamed C/llaahi (Cirro) oo Albaabada u furay xarunta uu Xisbigiisu ku yeelnayo Laascaanood.
Guddoomiye C/raxmaan Cirro ayaa la filayaa inuu kusii sugaando magaalada si uu ula socdo xaaladda diiwaan-gelinta cod-bixiyeyaasha doorashooyinka Somaliland. Wuxuuna ka mid ahaa hoggaanka Xisbiyada Somaliland oo shalay Laasaanood soo gaaray, sida Muuse Biixi iyo Faysal Cali Waraabe oo la socday Madaxweynaha.
Guddiga Federaalka ee Hir-gelinta Doorashada oo Kulan la Qaatay Bulshada Rayidka: AKHRISO
JAWAARI: Baarlamanka hadda jira shaqada wuu sii wadayaa illaa laga helayo Baarlamaan Bedela
Xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka Somalia ayaa kulan ay ku yeesheen maanta Muqdisho uga hadlay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii la dhisay 20-kii bishii Ogoosto ee Sannadkii 2012-kii. Iyadoo ay maanta ku eg-tahay xilligii jiritaankiisa oo Afar sano ahayd.
Kulanka ay xildhbaannadu Muqdisho ku yeesheen Muqdisho oo ahaa midkoodii ugu dambeeyay ayaa lagu soo bandhigay wixii u qabsoomay ee barlamaanka 10-aad ee ee soo socda uu ka dhaxli doono.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia, Maxamed Sh. Cismaan Jawaari oo kulanka hadal ka jeediyay, ayaa sheegay in Baarlamaanka Federaalka uu sii jirayo inta laga helayo baarlaman xilka kala wareega, sida ku cad Qararkii Baarlamaanka ay meel mariyeen ee ahaa qodobka 61-aad ee Dastuurka KMG ee Soomaaliya.
Sidoo kale, Guddoomiye ku xigenka labaad ee baarlamaanka, Mahad C/lla Cawad, ayaa xildhinabada baarlamaanka ka hor akhriyay Waxyabhii ugu Muhiimsanaa ee u qabsoomay afartii sano ee ay jireen, kuwaasoo uu ka xusay Xarunta Villa Haragysa oo leh xafiisyo kale duwan iyo hoy martida loogu talo-galay in guddiyadu ay shirar ku qaataan.
“Afartii sano ee uu jiray Baarlamaanka Federealka Soomaaliya, waxaa naftooda ku waayay weerarro ka dhacay Muqdisho 18-xildhibaan, kuwaasoo la dilay iyagoo gudanaha Waajibkooda shaqo. Waxaa kaloo la dilay Siddeed ka mid ahaa shaqaalaha rayidka ah ee baarlamaanka Somalia,” ayuu yiri Mahad Cabdalla Cawad.
Dhanka kale, Guddoomiye Jawaari ayaa ILAAHAY uga baryey inuu Jannadii Fardowso ka waraabiyo Xildhibaannadda iyo shaqalaha baarlamaanka ee geeriyooday, oo Qaar badan oo ka mid ah ay dishay Al-shabaab.
Ugu dambeyntii, Baarlamankan Federaalka oo ah kii Sagaalaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa Muddadii uu jiray wuxuu meel-mariyay 20-sharci oo muhiim u ah dalkeena xilligaan la joogo.
Haween Mudaaharaad ka dhigay goob uu khudbo ka jeedin lahaa Madaxweynaha Koonfur Afirka
Haween taageersanaa gabar magaceeda loo qarisay sababo Amaan, balse Warbaahinta Koonfur Afrika iyo Taageerayaasheeda ugu yeeraan Khwezi, ayaa xalay waxaay bannaan-bax aamusnaan ahaa ka hor sameysay khudbad Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma uu ka jeedinayay xarunta lagu tirinayay laguna soo gunaanaday Doorashooyinkii Dowladaha Hoose ee Dalka Koonfur Afrika.
Dumarkan, ayaa dhigayay Bannaan-bax Nabadeed Aamusnaan ah oo lagu Taageerayay Gabadhaas oo Sannadkii 2006-dii ku eedeysay Madaxweyne Zuma inuu Kufsi u geystay, markaas oo uu ahaa Madaxweyne ku xigeen, balse maxkamaddu ay caddeymo u heli wayday Kiiskeeda.
Sidoo kale, Ilaalada Madaxweyne Jacob Zuma ayaa shaashadaha laga arkay iyagoo si khasab ah uga saaraya Hablahaas Goobta, isla markaana ka Jeex-jeexay Warqadahii ay wateen oo ay ku qorneyd "10 sano ka hor - Xasuuuso Khwezi" iyo erayo kale.
Intaas kaddib, waxaa Wariyaasha goobta ku sugnaa ay isku dayeen in daba-kacaan ilaalada Gabdhaha ka xeystay, balse waa loo diiday inay soo raacaan, waxaana kaamirooyinka laga maqlayay haweenkii oo qaylinaya, taasoo loo qaatay inay ahayd jir-dil loo geysanayay.
Dhanka kale, Madaxweynaha Dalka Koonfur Afirka ayaa Masraxa isaga dagay waxaana arrintaan ay noqotay mid soo Xasuusisay 10 Sanno ka hor falkaan; markii lagu soo eedayay walow uu ka badbaaday.
Ugu dambeyn, Gabadhan Khwezi loogu yeeray oo Madaxweynaha Koonfur Afrika ku eedaysay inuu kufsi u geystay ayaan la ogeyn halka ay xilligaan ku nooshahay, waxaana mar ay deggenaansho ka heshay Dalka Holland markii ay ka baqday inay Taageerasha Zuma qaarijiyaan, iyadoo markii dambe ay soo tabisay warbaahinta in la dajiyay tuulo ku taalla Dalkaas Tanzania
Guddiga Doorashada Somalia ee Sannadkaan oo Maanta Shaaciyay Jadwalka Doorashada 2016-ka
Shir jaraa'id oo Maanta uu Muqdisho ku Qabtay Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Dadban ee Somalia, Avv. Cumar Maxamuud C/lle (Dhagey), ayuu ku shaaciyay Jadwalka qaabka ay u dhacayso doorashada lagu wado inay sannadkan ka dhacdo Soomaaliya.
Avv. Cumar Dhageey, ayaa sheegay in doorashada xubnaha aqalka sare ay dhici doonto 25-ka bisha September ee sannadkan, sidoo kale Doorashada Aqalka Hoose ay dhici doonto 24-ka September illaa 10-ka Oktoobar.
Sidoo kale, Doorashada Guddoonka Baarlamaanka cusub ayuu Shaaciyay in ay dhacayso 25-ka Bisha Oktoobar, waxuuna carrabka ku dhuftay in Doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 30-ka bisha Oktoobar ee Sannadkaan.
Horay ayaa waxaa loo shaaciyay in doorashada Gudoonka Baarlamaanka ay dhici doonto 28-ka bisha Oktoobar, halka tan madaxweynaha Soomaaliya ay dhici doonto 07-da bisha November ee sannadkan 2016-ka.
Dhanka kale Jadwalkii hore ee ay shaaciyeen warbaahin ay ka mid tahay HOL ayaa waxaa la sheegay in is-bedel lagu sameeyay, kadib markii mas'uuliyiinta Madasha Wada-tashiga Doorashada ay doodka yeesheen, taasoo keentay in Waqtigaas laga soo hormariyo.
Ugu dambeyn, Madasha Wada-tashiga Doorashada dalka ayaa weli Muqdisho ka socota, waxaana la dhawrayaa go'aannada laga soo saaro, balse si dhab ah looma oga xilliga War-murtiyeedka shirkan uu soo bixi doono.
Wadahadalo u furmay Khatumo iyo Somaliland
Wadahadalo ayaa u furmay Khatumo iyo Somaliland. Khatumo ayaa madaxweynaheeda Cali Khaliif Galeyr uu u xaqiijiyay arinkaa warbaahinta.
Somaliland ayaa gooni isu taagtay sanadkii 1991 kadib markii dawladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. Si kastaba wax aqoonsi ah maysan ka helin beesha caalamka min waqtigaa ilaa iyo hada.
Waxaa muran uu ka taagnaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Ceyn oo Puntland iyo Somaliland midba gaar u sheegto.
Sidoo kale ayaa Khatumo waxay ku andacootaa inaysan midna raacsanayn. Haatan Cali Khalif Galayr wuxuu xaqiijiyay inay ku hungoobeen dawlada federaalka ah ee Soomaaliya iyo mashruucii New Deal oo uu sheegay inaysan dan Soomaaliyeed wadin, waa siduu hadalka u dhigaye.
Wuxuu sheegay wada hadalada bilowday in la doonayo in lagu xalliyo dagaalo Somaliland iyo Khatumo ku dhexmaray Saaxdheer iyo meelo kale oo wada hadal wax dhaama uusan jirin.
In dhawaale waxaa jiray meelahaa laisku heysto warar sheegaya in shidaal laga baarayo isla markaana shirkadaha baaraya oo ajnabi ah ay doonayaan nabad meelahaa ka dhacda si ay hawshu ugu fududaato isla markaana ay ayagu wadahadalada cadaadis ku saarayaan darfaha is haya.
Arinkaa waa uu beeniyay Barafasoor Cali Khalif Galayr.